bq Aquaris X5, taleefankii ugu horreeyay oo wata Cyanogen | Androidsis
Alfonso ee Miraha | | Bq
Soo-saaraha Isbaanishka ee bq wuxuu ku guuleystey inuu boos ka helo suuqa iyadoo ay ugu wacan tahay qiimaha wanaagsan ee tayada-wanaagsan ee alaabteeda. Waxayna umuuqataa in wiilasha bq inbadan rabaan. Oo iyagu uun bay ku dhawaaqeen bq Aquaris X5, Taleefankii ugu horreeyay ee shirkaddu la yeelato Cyanogen oo ah heer ahaan.
Si loo furo taleefankan bq wuxuu iskaashi la yeeshay Telefónica oo bixisa taleefan aad u xiiso badan oo leh Cyanogene 12.1, nooca ugu dambeeya ee mid ka mid ah ROMS-ka ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android. Intaa waxaa dheer, macaamiisha Telefónica waxay awoodi doonaan inay maalgeliyaan taleefanka iyagoon dulsaar lahayn.
1 Telefónica iyo bq waxay bilaabeen bq Aquaris X5 oo ay la socdaan Cyanogen 12.1
2 Taariikhda iyo qiimaha la siidaynayo
Telefónica iyo bq waxay bilaabeen bq Aquaris X5 oo ay la socdaan Cyanogen 12.1
Astaamaha farsamo ee bq Aquaris X5 cusub ayaa si cad u sheegaya in qalabkani uu ku dagaalami doono bartamaha suuqa Android. Sidan oo kale, X5 wuxuu leeyahay shaashad 5-inji ah oo gaareysa xallinta Full HD, marka lagu daro inuu leeyahay processor Qualcomm Snapdragon 412 oo ay weheliso 2 GB oo RAM ah.
Xusuusteeda gudaha ee 16 GB waxay umuuqataa xoogaa cadaalad ah laakiin waa lagu balaarin karaa iyada oo loo marayo booska kaarka micro SD-ka. Intaa waxaa dheer, bq Aquaris X5 wuxuu leeyahay kamarad weyn oo ah 13 megapixels oo leh flash LED iyo suurtagalnimada in lagu duubo fiidiyowyo tayo sare leh HD, iyo waliba kamarad 5 megapixel ah.
Batarigeeda 2.900 mAh ayaa in kabadan inta kufilan si loo taageero dhamaan culeyska qalabka taleefankan, sidaan soo sheegnay, wuxuu la shaqeyn doonaa Android 5.1 Lollipop inkasta oo Cyanogen 12.1 caadadii ROM.
Taariikhda iyo qiimaha la siidaynayo
Bq Aquaris X5 oo leh Cyanogen 12.1 ayaa la filayaa ayaa maanta ka bilaabmi doona Spain waxayna gaari doonaan Jarmalka iyo Boqortooyada Ingiriiska toddobaadyada soo socda. Inta lagu jiro sanadka 2016, Telefónica waxay qalabkan u keeni doontaa dalalka intiisa kale ee ay ka howlgasho.
Sida qiimaha, ah bq Aquaris X5 wuxuu ku kacayaa 209 euro VAT oo lagu daray, inkasta oo macaamiisha Movistar ay awoodi doonaan inay maalgeliyaan aaladda iyada oo aan wax dulsaar ah la siinin iyaga oo bixinaya 8.7 euro bishiiba 24 bilood. Qalab aad u xiiso badan oo soo jiidan doona tiro wanaagsan oo adeegsadayaal ah oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah inuu la yimid heerka Cyanogen 12.1.
Tallaabo weyn oo ay qaadeen bq iyo Telefónica oo awood u yeeshay inay arkaan sida suuqa Android u shaqeeyo. Isticmaalayaashu waxay sii wadaan cabashada ku saabsan lakabyada qaabdhismeedka xun ee soo saarayaasha badanaa ku dhex daraan qalabkooda. Waa maxay telefoonka ka fiican mid ka mid ah in vSerial enga oo leh ROM-ka ugu fiican ee laga heli karo caalamka Android!
Midka kaliya laakiin waxaan kaheli karaa waa qiimaha: anigoo tixgelinaya processor-ka ay isku dhafan tahay, waxay ila tahay in 200 euro aan ku heli karno xalal wanaagsan, sida Moto G2015. Waan arki doonaa sida iibka bq Aquaris X5 ay ugu shaqeeyaan iyaga.
Adigana, maxaad u malaynaysaa taleefanka cusub ee bq? Miyaad u maleyneysaa in bq Aquaris X5 oo leh Cyanogen 12.1 uu ku guuleysan doono suuqa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Bq » bq Aquaris X5, telefoonkii ugu horreeyay ee Cyanogen wata
nin ma aanan isku dayin, motoG, x5 waxay u fiicantahay hamigeyga, lacag, tan xiisaha leh, ma haysto raaxo, waan xiiseynayay waxaan arkay kuwa kale sida zte v6 waana inay noqotaa ul, wixii aan ku arkay walaalkiis ka yar, anigu lacag kuma hadlin haddii aan ka ahayn faa'iidooyinka, raaxada waxay ahayd waqtigii loogu talagalay 200e waxaan haysannay wax wanaagsan oo weyn, salaan
LinkedIn waa la cusbooneysiiyay Qalabka Naqshadeynta nooca 4.0
Isku day FireFox OS mobilkaaga Android adiga oo adeegsanaya barnaamijkan fudud ee bilawga ah